Fiiri astaamaha marin u helka ee iOS 13 | Wararka IPhone
Fiiri astaamaha marin u helka ee iOS 13
macruufka 13 macnaheedu waa a isbedel dhinacyo badan, laakiin Apple waxay dooneysay inay si weyn u maal gasho helitaanka dadka naafada ah ama cilladaha nooc ka mid ah nidaamka hawlgalka. In kasta oo mawduuca aan lagu soo koobi karin soo bandhigida WWDC, ka dib markii aan wax ka weydiinay Settings-ka nooca cusub waxaan arki karnaa warar xiiso leh. Mid ka mid ah sheekooyinka cusub ayaa ah xakamaynta codka taas oo shaqo fiican la socota ikhtiyaarka «Akhriso xulashada», inaad awood u yeelatid inaad ku maamusho dhammaan macluumaadka iyo dhaqdhaqaaqa qalabka kaliya codkeena. Waxaan eegnaa qaababka marin u helka ee iOS 13.
IOS 13: waa mid la heli karo, casri ah oo dheecaan badan leh
Qaado sawir qoys, soo qaado FaceTime, ama isku soo duub indhoolayaasha subaxa hore. Waxaan dooneynaa in qof walba uu ku raaxeysto daqiiqadaha maalinlaha ah ee tikniyoolajiyaddu bixiso. Taasi waa sababta aan ugu dadaalno inaan ka dhigno alaabada Apple mid laga heli karo daqiiqad ahaan eber. Sababtoo ah qiimaha dhabta ah ee aaladda laguma cabbiro awoodeeda, laakiin waxaa lagu cabbiraa fursadaha ay siiso mid kasta.
Hordhaca ah Gaaritaan waayo Apple waa inay u oggolaato wax soo saarkiisa in si shaqsi ah loogu habeeyo baahiyaha ama baahiyaha isticmaale kasta. Macruufka waxaan ku haynaa qayb gaar ah oo loogu talagalay noocyadan oo leh daraasiin hawlo wanaagsan oo horeyba loogu heli jiray noocyada kale ee iOS laakiin la xoojiyay oo ay ku sii xasilloon yihiin noocyada cusub. Taasi waa sababta aan uga wada hadli doonno qaar ka mid ah astaamaha marin u helka:
VoiceOver: Waa mid ka mid ah classics helitaanka Apple. Qalabkan waxaan ku sameyn karnaa dhamaan walxaha aan ka dooneyno shaashadda akhriska, waxaan ku furi karnaa xarunta xakamaynta, howlo badan iyo xarunta ogeysiinta qaab aad u fudud, iyadoo fiiro gaar ah la siinayo taxane dhawaaqyo dhawaqyo leh oo mararka qaarkood dhaca, iwm Waxay sidoo kale u oggolaaneysaa isku xirnaanta bandhig indhoole iswaafaqsan. Waa muhiim in la xoojiyo tirada xulashooyinka la beddeli karo.
Cabirka shaashadda iyo qoraalka: khaanaddaan waxaa ku yaal wax ka badan hal shaqo oo cusub. Waxaan ka dhigi karnaa nidaamka oo dhan geesinimo, waxaan kordhin karnaa farqiga xarfaha marka loo eego asalka dalabka, yareynta daahfurnaanta ... Mid ka mid ah waxyaabaha cusub ee iOS 13 ayaa ah Miirayaasha midabka dadka araga naafada ka ah. Sidan ayaan ku dalban karnaa shaandhooyin kala duwan iyadoo kuxiran in isticmaalaha uu leeyahay indho la'aan midab ah 3 noocyadeeda kala duwan: protanopia, deuteranopia ama tritanopia.
Akhriso waxyaabaha ku jira: Muuqaal kale oo cusub oo ku jira iOS 13 oo kuu oggolaanaya inaad akhrido xulashadaada. Markii aan hawlgalinayno waa inaan dooranaa qoraalka oo gujinaa «Akhriso» si aan u bilowno akhrinta qoraalka la doortay.
Taakulo: Waa hawl kale oo macruufka ah ee macruufka ah oo dhigeysa badhanka guriga muraayadaha shaashadda, laakiin waxaan sidoo kale ku wici karnaa codsiyada adoo sameynaya tilmaamno, iwm.
Iswaafajinta gargaarka maqalka ee MFI: suurtagalnimada isku xidhka qalabka maqalka ee la jaan qaadaya shahaadooyinka Apple kaas oo u oggolaan doona wax ka beddelka gelinta iyo soo saarista dhawaaqyada loo qaabeeyey jirrooyinka qof kasta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Fiiri astaamaha marin u helka ee iOS 13
Xanta qaar ayaa tilmaamaya iPad Pro isku laabma oo leh 5G